Tallaalkii jaamacadda oxford ee virus-ka corona oo hakad la geliyay ka dib markii dad lagu tijaabiyay ku xanuunsadeen - Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Tallaalkii jaamacadda oxford ee virus-ka corona oo hakad la geliyay ka dib markii dad lagu tijaabiyay ku xanuunsadeen
On Sep 9, 2020 118
Ababa Sep 9, 2020 (Baagume 4,2012 T.I) (FBC/SOMALI)-Tijaabo lagu sameeynayay talaalka feyraska corona ayaa hakad la geliyay guud ahaan caalamka ka dib markii dadkii sida mutadawacnimada ah loogu tijaabiyay ee dalka UK uu jidhkoodu uga falceliyay si ka duwan sidii la rabay.
Afhayeen u hadlay shirkadda ayaa sheegay in dadkii ka qeyb galay tijaabadani talaal la dhigay isbataal islamarkana baadhitaan madaxbanaan lagu sameyn doono.
Waxa sidoo kale talaalkan tijaabadiisa ka qeyb galay muwaadiniinta dalalka Koonfur Afrika, Brazil iyo Mareykanka.
Waxaa guud ahaan caalamka ay shirkadaha iyo dowladaha ay tartan ugu jiraan sidii loo soo saari lahaa talaal looga hortago feyriska fara’aha ba’an ku haya caalamka ee Corona.
Waxaa caalamka guud ahaan iminka tijaabo ku jira 30 tallaalka looga hortagayo feyriska koroona oo ay wadaan shirkado iyo Seynisyahano kala duwani.
Geesta kale,Madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu doonayo in talaalka feyriska Corona uu diyaar noqdo ka hor doorashada 3 bisha November.
Hay’adda caafimaadka aduunka ee WHO ayaa sheegtay in ku dhawaad 80 nooc oo talaal ah la tijaabiyay guud ahaan caalamka, balse dhammaantood aan wali la dhameystirin.
Donald Trump ayaa horay ugu weeraray hay’adda caafimaadka adduunka ee (WHO) sida ay u waajahday cudurka safmarka”coronavirus”, waxaana uu ku eedeeyay inay u xaglinayso dhanka Shiinaha sababtoo ah sida ay ula tacaamushay hagitaankeeda ku aadan cudurka.